Alshabaab oo la wareegey deegaamo katirsan Laasqoray | Wardoon
Home Somali News Alshabaab oo la wareegey deegaamo katirsan Laasqoray
Wararkii ugu dambeeyey ee aannu saaka ka helayno degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag ayaa sheegaya in Alshabaab ay saaka la wareegeen tuulada Milxo oo dhacda inta u dhexaysa deegaanka Durduri iyo degmada Laasqoray.
Malayshiyaad katirsan ururka Alshabaab oo ku gaashaaman hubka garbaha lagu qaado ayaa la sheegay inay saaka aroortii weerar ku qaadeen deegaankaasi, waxaana halkaasi dagaal ku dhexmaray ciidamo deegaanka ah oo ka soo horjeedey qabsashada Alshabaab.
Warar hoose ayaa sheegaya in malayshiyaadka argagixisada ah ay afduubeen guddoomiyihii Tuulada Milxo Maxamed Jaamac Aar (Bulbul) iyo shakhsiyaad kale, oo ay u arkeen inay ka soo horjeensan doonaan inkastoo aan weli si rasmiya loo xaqiijin.
Weerarka malayshiyaadka Alshabaab ku qaadeen deegaanka Milxo ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ay soo bexeen warar sheegaya in dagaalyahano katirsan ururka Alshabaab ay hub kala soo degeen deegaamo hoosyimaada Laasqoray.
Previous article(Akhriso) Hanti dhawrka Qaranka oo soo bandhigay lacago la lunsaday xiligii Khayre
Next articleDAAWO:-” Haa Aniga ayaa Dilay”
Akhriso magacyada Guddiga doorashada Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland
War.Cusub Dowladda Somaliya Oo mar kale war ka soo saaray Dulimaadyadda...